Hobiyeyaal lagu weeraray Deg. Janaale iyo Khasaare ka dhashay | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Hobiyeyaal lagu weeraray Deg. Janaale iyo Khasaare ka dhashay
Qaar ka mid dadkii ku dhaawacmay Hoobiyeyaashii ku dhacay degmada Janaale
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in hoobiyeyaal khasaare geystay lagu weeraray deegaankaasi, sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta maamulka gobolka.
Hoobiyeyaashan ayaa waxaa laga soo tuuray duleedka Deegaanka Janaale, waxaana ku dhaawacmay illaa saddex ruux oo shacab ah, kadib markii guryahooda ay kula dhaceen.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in illaa Saddex ruux oo Shacab ah ay ku dhaawacmeen hoobiyeyaasha, isla markaana Maamulka deegaanka iyo Ciidamada xooga ay u gurmadeen laguna daweynayo Isbitaalka deegaanka.
“Saddex qof oo shacab ah ku dhaawacmay hoobiyaal ay Maleeshiyadda Shabaab ku soo tureen Gudaha Deegaanka Janaaale, Gudoomiyaha Janaale iyo Ciidanka Xooga dalka ayaa u gurmaday shacabka kana soo saaray guryihii ay waxyeelada ku soo gaartay si loogu dabiibo isbitaalka Deegaanka‘‘ ayuu yir Guddoomiye najax.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax faah-faahin intaasi ka dheer ee uu bixiyay Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, hayeeshee mararka qaar ayaa madaafiic ay isweeydaarsadaan Ciidamada Amisom iyo Al-Shabaab waxaa ay waxyeelo kasoo gaartaa dadka Shacabka ah ee ku nool degaanka Janaale.
Hobiyeyaal lagu weeraray Janaale